Biby any an'efitra Sahara | News Travel
Biby any an'efitra Sahara
Mariela Carril | 10/05/2022 17:00 | Africa
Ny efitr'i Sahara dia iray amin'ireo tany efitra malaza indrindra eran-tany, miaraka amin'ny andro mafana sy ny alina mangatsiaka. Toa tsy misy na iza na iza afaka miaina ao ary na izany aza, manana fiainana be dia be ny Sahara.
Ao amin'ny dongom-pasika, izay ahafahan'ny olona maka sary an-tsaina fa tsy misy rano indray mitete mahavelona, ​​raha ny marina dia ny mifanohitra amin'izany no mitranga: ny Sahara dia tondraka amin'ny fiainana! Ny biby ao aminy dia anisan'ireo karazana tranainy indrindra eto an-tany ary nahavita nampifanaraka ny toe-piainana izay tsy mora mihitsy. andao hojerentsika anio ny biby any Sahara.
2 rameva dromedary
3 Dorkasy Gazelles
4 voangory diky
5 bibilava misy tandroka
6 androngo manara-maso
7 maingoka mpamono
8 aotirisy tany efitra
9 alika afrikana bibidia
10 saharan cheetah
11 fennec fox
13 Anubis Baboon
15 an-tany efitra
16 mongoose manify
17 hyena hita
Izy io dia karazana antilopa fisaka tongotra, tongotra mamela azy handeha amin'ny fasika. Saingy mahamenatra izany atahorana ho lany tamingana satria mitady ny henany sy ny hodiny izy ireo, ankoatra ny fiharatsy ny toeram-ponenany noho ny fiakaran’ny maripana sy ny asan’ny olombelona.
Amin'izao fotoana izao dia kely kokoa noho ny taloha ireo biby ireo ary noho ny tongony dia sarotra ho azy ireo ihany koa ny mandositra ireo biby mpiremby voajanahary.
Ny rameva sy ny tany efitra dia miara-mandeha ary ny dromedaris, ny rameva vony roa, no karatra paositra mahazatra an'i Sahara. Eto amin'ny vombony no mitahiry tavy ny biby fa tsy rano. Afaka misotro rano 100 litatra ny rameva ao anatin’ny folo minitra monja!
Biby koa izy io tena voafolaka, iray amin'ireo biby fiompiana lehibe any an'efitra, ary ampiasaina betsaka izy io satria matanjaka be ary afaka mandeha kilometatra maro tsy misy rano na sakafo. Ry namana akaiky indrindra eto an-tany manao ahoana ianao!
Izany no karazana mahazatra indrindra amin'ny gazela rehetra: 65 sm ny halavany ary milanja 50 kilao eo ho eo. Anarana hafa azony dia "Ariel gazelle". Ireo dia biby tsy mihinana sakafo mihinana ravinkazo sy hazo.
Efa nahita azy ireo nitsambikina ve ianao rehefa nahita ny biby mpiremby azy? Izy ireo ary araka ny nambaran’ireo manampahaizana manokana dia mba hanehoana azy ireo fa salama tsara izy ireo ary hidona amin’ny adin’omby amin’ny fiainany. Manana herim-po izy ireo eny, fa na dia izany aza dia karazana tena marefo.
Izany ve voangory mainty kely miposaka be ary izany no mihinana ny zavatra rehetra navelan'ny biby hafa. Karazana telo no isaina, ny iray manao poop baolina, ilay mihady lavaka sy ilay malaina ary tsy miaina afa-tsy ao anaty diky.
Io fomba amam-panao eskatôlôjika io, ny fanaovana baolina poop, no tian'ny lahy amin'ny karazana. Ny vehivavy dia mihady lavaka ary mijanona ao anatiny.
bibilava misy tandroka
Antsoina hoe bibilava fasika sy lakandrano koa izy ireo mitombo hatramin'ny 50 santimetatra ny lavany. ihany mahita azy ireo amin'ny alina ianao ary amin'ny ankapobeny dia milevina ao anaty fasika izy ireo mandritra ny andro. Moa bibilava misy poizina izay mety hiteraka fahasimbana be amin'ny hoditra, manimba sela ary miteraka poizina be dia be.
Ny bibilava misy tandroka ankehitriny dia a karazana atahorana ho lany tamingana indrindra noho ny fahapotehan'ny tontolo iainany. Tsy misy mahalala marina ny antony ananan'izy ireo tandroka eo amin'ny masony, na dia heverina aza fa natao hiarovana azy amin'ny fasika izany na hivezivezena ao na hanakonana...
biby mandady izy io tena misy poizina, mangatsiaka, noho izany dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fihetsik'izy ireo ny mari-pana manodidina. Mipetraka ao anaty toho-tantely mafana izy ireo ary rehefa mangatsiaka ny andro dia tsy hita intsony. Izany no mahatonga ny androngo tsy manana mekanika miady mihitsy, ka rehefa mangatsiaka ny andro dia lasa miaro tena izy ary lasa masiaka be.
Inona no hohanin'ny androngo? Mihinana biby kely toy ny voalavo, biby mampinono na bibikely izy ireo. Izay rehetra hitany.
Izany dia bibikely misy poizina ary mampiasa ny fiadiany amin'ny fomba roa izy ireo: amin'ny tsindrona lavany no mandratra ny mpifanandrina aminy ary amin'ny tsindrona kely sy malemy kokoa, izay misy tendrony mainty indrindra, no indroany ny poizina.
Manana neurotoxine io poizina io ary miteraka fanaintainana be. Ny ankizy sy ny zokiolona dia tena mora voan'ny aretina, ka mitandrema tsara. Ny tena ratsy dia misy olona mivarotra azy ireo ary mivarotra azy ho biby fiompy.
aotirisy tany efitra
Vorona tsy manidina, mahantra. Izany no fiheveran'izy ireo azy foana, fa raha ny marina, ny tsy fahafahany manidina dia mameno izany amin'ny maha-izy azy iray amin'ireo biby haingana indrindra eran-tany. Afaka mihazakazaka 40 kilaometatra isan’ora ny aotirisy, na dia lehibe aza.
Misy karazana aotirisy isan-karazany any amin'ny efitr'i Sahara, hoy izy ireo atody goavam-be ary ny tongony lava dia manana rantsan-tongotra roa, izay tsara ho an'ny fandehanana lavitra. Ireo tongotra ireo koa dia matanjaka be, afaka mamely super daka, ary ampiana izany fa manana fahitana mahafinaritra sy fandrenesana miavaka izy ireo.
Ny aotirisy desert amin'ny ankapobeny dia tsy lasa lavitra ny loharano ary raha mijery azy tsara ianao dia tandremo fa misy biby mpiremby eo akaiky eo. Inona no haniny? Hazo madinika, ahitra, biby kely indraindray.
alika afrikana bibidia
Alika bibidia mahery vaika izy ireo ary tena miziriziry amin'ny fanenjehana ny rembiny izay, rehefa tonga any izy ireo, dia avoakany. Ny alika dia mipetraka ao amin'ny savannahs any atsimo sy afovoan'ny tany efitra, in omby mitoka-monina
Tombanana izany Ny taham-pahombiazan'izy ireo rehefa manomboka fihazana dia mihoatra ny 80%, 90% ao amin'ny Serengeti, raha ny fahombiazan'ny liona dia 30%. Tena nahomby izy ireo! Ary raha tsy ampy izany, rehefa avy namono ny rembiny izy ireo dia namela ny alika antitra sy ny puppy hisakafo aloha.
Ireo biby ireo Efa lany tamingana izy ireo, biby 250 eo ho eo no tavela any amin’ny Sahara afovoany sy andrefana ary any amin’ny savannah any Soudan. Mifanohitra amin'ny cheetah hafa ity subspecies ity dia kely kokoa, miaraka amin'ny lokon'ny akanjo vitsy, ary fohy kokoa.
Ny cheetahs any amin'ny efitr'i Sahara mihaza tsara kokoa izy ireo amin'ny alina ary izany dia vokatry ny hafanan’ny tontolo iainany. Afaka miaina ela kokoa noho ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy tsy misy rano izy ireo, satria misotro ny ran'ny rembiny.
Fanak midika hoe amboahaolo amin'ny teny arabo ka ny anaran'io amboahaolo kely io dia somary mihemotra. Ny Fox kely izy io, iray amin'ireo alika kely indrindra ao amin'ny fianakaviana misy amboadia, amboahaolo ary alika. Maivana be ny volony ary manampy amin'ny taratry ny tara-masoandro.
ity fox manana voa miompana amin'ny tany efitra, noho izany dia manamaivana ny fahaverezan'ny rano amin'ny vatanao izy ireo. Manana fofona mahafinaritra sy mandre tsara. Izany no mahatonga azy ireo hanara-maso ny rembiny amin'ny fihainoana, amin'ny ankapobeny. Afaka mananika hazo koa izy ireo mba hitady vorona kely sy atody.
Izy io dia biby mpikiky izay efa nifanaraka tsara tamin'ny fiainana tany an'efitra masiaka. Afaka mitsambikina sy mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha avo, ka izay no mahatonga azy ho velona sy handositra ireo mpihaza azy. Ny sakafon'izy ireo dia misy bibikely, zavamaniry ary voa, izay ahazoany rano ihany koa.
Karazam-biby afrikanina be izy io ary hita any amin'ny faritra be tendrombohitra any Sahara. Misy loko somary volondavenona avy lavitra, fa rehefa akaiky dia maro loko.
Ny lahy dia lehibe noho ny vavy ary velona any an'efitra amin'ny fihinanana kely ny zava-drehetra, zavamaniry sy biby madinika.
Izy io dia subspecies amin'ny fianakaviana bustard. Vorona izany mivelona indrindra amin'ny bibikely, na dia noana be aza ianao dia afaka mihinana voa. Ny fahaverezan'ny toeram-ponenany dia midika fa mihavitsy ny isan'io karazana io, ka azo heverina ho tandindonin-doza.
Hedgehog kely malemy izy rehefa mahatsiaro ho atahorana ka manjary miboiboika, ka sarotra be ny misambotra azy satria manindrona eny rehetra eny. Mihinana izany? Bibikely, atody ary zavamaniry.
Ilay mongoose rambo mainty io. Mihinana bibikely izy, na dia mihinana androngo, biby mpikiky, vorona ary bibilava koa aza. ihany koa afaka mamono sy mihinana bibilava misy poizina, fa raha mahatsiaro tena ho voarahona ianao.
Ity mongoose ity dia afaka mananika hazo tsara lavitra noho ny mongoose mahazatra, ka mihinana vorona betsaka.
Izany no "hyena mitsiky". Tsy mbola eo an-dalam-paharinganana izy io, fa marina fa nihena ny isan’izy io rehefa nandeha ny fotoana sy ny fahaverezan’ny tontolo voajanahary. Raha ampitahaina amin’ny karazana hyena hafa izy io, dia miseho ny pentina, na dia miova loko aza ny lokony rehefa antitra ny hyena.
Mihaza ny rembiny ny hyena misy pentina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Biby any an'efitra Sahara
Kianja lehibe indrindra any Espaina
Tanàna tsara tarehy any Badajoz